Mmemme – hoo!haa!!
NCHETA ỌMỤMỤ: ODOZIAKỤ ỤZỌ OKOLO
Taa bụ EKE, abalị ise nke ọnwa Febrụwarị bu ụbọchị Ncheta Ọmụmụ Odoziakụ Ụzọ Okolo. Ọ bụ onye Ọgbakụ nke di n’okpuru Ọchịchị Ọgwụ n’Enugwu Steeti. O bikwa n’Enugwu. Lezie ọfọ ọ gọrọ maka ụbọchị ncheta ọmụmụ ya: “A na m ario Chineke ka O gozie m, nye m ogologoRead More →
AKWAMOZU MAMA SILVA AKAMNỌNỤ, ONYE FỌ́RỌ́ OBERE KA O RUO OTU NARỊ AFỌ
Owere – Ezinne Ribeka Akamnọnụ (Ada Ike) ka a nọrọ ụbọchị Fraịdee, abalị iri abụọ n’itolu nke ọnwa Nọvemba afọ 2019 were mee mmemme akwamozu ya na Ndiakụnwata uno, Arọndizuogụ. Olili ozu n’akwamozu ya bụ mmemme ịtụ mma ma nakwa inye Chineke ekele maka na ya bụ nwanyị mezuru iheRead More →
EHIWELA OTU NDỊ GỤRỤ AKWỤKWỌ N’ỤLỌ AKWỤKWỌ SEKỌNDỊRỊ ONYE NSỌ ANTONI, ỌHAFIA
Ụmụahịa: Ndi gụrụ n’Ụlọ akwụkwọ Sekọndịrị nke Onye nsọ Antoni, Ọhafia, Abịa Steeti nọrọ n’abalị iri abụọ n’itolu, nke ọnwa Disemba afọ 2018 gbakọọ n’ogige ụlọ akwụkwọ ahụ were hiwe ọgbakọ ndị gụrụ akwụkwọ ebe ahụ (old boys Association) . Bishop Antoni Gogo Nwedo hiwere ya bụ ụlọakwụkwọ n’afọ 1985.Read More →
Edinbo: Igwe Lọrịns Agụbụzụ, Onyeisi oche ndị eze ọdịnala n’Enugwu Steeti ma bụrụkwa Eze Ọgbụnechendo nke Mbụ n’Ezema Olo nke dị n’Okpuru Ọchịchị Ezeagụ, n’Enugwu Steetiekwuola na “ihe ọbụla dị mma onye Igbo ọbụla na-eme iji kpata ihe ọ na-eri bụ ụzọ o si akọ ji”. Eze ọdịnala a, onyeRead More →
IRI JI NZE N’ỌZỌ GBURUGBURU N’AMERỊKA
Amerịka: Ụbọchị Satọdee, abalị iri abụọ n’anọ nke ọnwa Ọgọọst ka otu Nze n’Ọzọ Gburugburu n’Amerịka nọrọ na Baltimore dị na steeti Meriland were chịkọba mmemme Iri Ji afọ 2019 maka ndị Igbo bi na mba Amerịka. N’agbanyeghị na ihe a bịara bụ mmemme iri ji, ji dịzị ụkọ nkeRead More →
UGWUTA:IRI JI EZE ABDULFATAR EMETUMA
Ugwuta: Eze Abdul Fatar Chima Emetumah nke Ụmụọfọ, Ugwuta mere mmemme Iri Ji n’abalị mbụ n’ọnwa Julaị, afọ a. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị Igbo bụ ndị ụka taa mana e nwekwara ndị bụ ndị Ọgọ mmụọ nakwa ndị Alakụba. N’obodo a, ọtụtụ n’ime ha bụ ndị Alakụba manaRead More →
NCHETA ỌMỤMỤ DUMEBI
Taa bụ abalị itoolu nke ọnwa Julayị bụ Ncheta Ọmụmụ Oriakụ Dumebi Ọjị. Dumebi bụ onye Ndikeliọnwụ dị n’okpuru ọchịchị Orumba nke Mgbago Ugwu, Anambara ma a lụ ya n’Emudo-Nenwe dị n’okpuru ọchịchị Aninri, Enugwu Steeti. Ozi ekele ya:” A na m ekele Chineke onye dewere m ndụ wee ruoRead More →
ỌKA OKORO, EJIJE ỌPỤRỤICHE APỤTAWO
Abụja: Ndị nile omenala Ndigbo nakwa ejije Nollywood na-amasị ga-ezukọta n’ụlọ onyonyoo Genesis Cinema dị na Novare Gateway Plaza(Shoprite), Abuja n’ụbọchị Satọdee, abalị iri n’abụọ n’asaa nke ọnwa Julaị maka ngosipụta mbụ nke Ọka Okoro. Ọka Okoro bụ ejije banyere ihe mere eme n’obodo Nenwe dị n’okpuru ọchịchị Aninri n’EnugwuRead More →
NCHETA ỌMỤMỤ NEKY
NCHETA ỌMỤMỤ ORIAKỤ NNEKA IBEKWE Taa bụ ụbọchị ụka nkwọ abalị asaa nke ọnwa Julayị ka ORIAKỤ NNEKA EDITH IBEKWE na – eme Ncheta Ọmụmụ ya nke iri afọ anọ n’isii ya. Neky, dịka ndị enyi nakwa ikwu n’ibe si akpọ ya bụ Ada Ekwuluọbịa mana ije di bugara yaRead More →
ABỊRỊBA EMEELA MMEMME IRIAMA
Enachoken Eze Kalu Kalu Ogbu (IV) ekwupụtawo mkposa ekposara ndị ọchịchị nọbu n’isi otu Abiriba Communal Improvement Union (ACIU) nke Mazị Eke Agbai nọ n’isi ya. N’okwu ya n’oge “Itu Eye” nke e mere n’ezi Amaukwu, Amaeke, Abiriba iji merube Mmemme Iriama nke afọ a e mere na ngwucha izu ỤkaRead More →
Abuja: Otu Nenwe Integrity Foundation (NIF) nọrọ ụnyaahụ, abalị iri abụọ n’abụọ nke ọnwa Juun nke afọ a n’ụlọ ezumezu ndị agha a na-akpọ Army Headquarters officer’s Command Mess 1, Abuja were kwanyere Osote Onyeisi ndị Uwe ojii na Naịjiria bụ DIG Godwin Nwobodo ugwu maka mbuli n’ọkwa ya. NdịRead More →
ORIRI NCHETA ỊGBA AFỌ “ENERGY”
Enugwu: Ụlọ erimeri Sizzlers nke nọ n’ogige Polo Park Mall kpọtụrụ akpọtụ n’ụbọchị Wenzdee, abalị iri n’abụọ nke ọnwa Disemba afọ 2018 mgbe Injinịa Agọzie Ibekinwa mere mmemme ncheta ịgba afọ ya. Mazị Agọzie Ibe onye nke e ji “Energy” mara kelere Chineke maka ihe ọma nile o mere ya.Read More →
A nọrọ ụnyahụ bụ Sọnde, abalị iri nke ọnwa Juun, n’ụlọ ụka ndi Anglican nke St Faith dị n’Ezele,Ọba nke nọ n’Okpuru ọchịchị Ndịda Idemili nke Anambara Steeti were kaa ụka iji cheta otu afọ e jiri mee akwamozu otu onye Ndigbo ji eme ọnụ bụ Ọkammụta Benedict Ebele Ọbụmselụ.Read More →